Ku saabsan-ZHEJIANG JINGLI TOOLS CO., LTD.
Waxyaabaha cusub ee imaanshaha
SHIRKAD LA DHISAY
Qaabaynta nooc si loo dhiso istiraatiijiyad weyn oo caan ah
1. Kordhinta maalgashiga xayeysiinta sumadaha: Jaangooyo aqoonsiga suuqa VI ee shirkadda adoo jihada saxda ah ee suuqa, nidaaminaya macluumaadka xayeysiinta suuqgeynta, wax ka qabashada xiriirka dadweynaha iyada oo loo marayo wadiiqooyinka "berriga, badda iyo hawada" iyo sidoo kale nidaamka warbaahinta badan.
2. Widen kala duwan ee alaabta: Ku buuxi silsiladda alaabta maalgashi toos ah, iibsiga, wadajirka ah ama OEM ku xiran tayada damaanad qaaday. Waqtigaan la joogo shirkaddu waxay daboolaysaa qalabka korontada, kombaresarada hawada, qalabka baytariga lithium, aaladaha beerta oo iyagu si madax-bannaan u shaqeeya shirkado.
3. In la jaangooyo bii'ada ay ka hawl galayaan dukaamada calamada: 5ta sano ee soo socota, shirkadu waxay samayn doontaa maalgashi balaaran si kor loogu qaado dukaamada calamiga ah ee loo yaqaan 'franchised flagship' ee kuyaala 1,573 degmo iyo 857 degmo oo maamul oo leh astaan ​​sumadeed isku mid ah, jawi ay ku shaqeeyaan iyo alaab isku mid ah.
Dhis nidaam hawleed nidaamsan iyo istiraatiijiyad kanaal
1. Nidaamka adeegga:
1. Dhisid ka dib kooxda adeegga iibka si ay u bixiyaan adeeg dahabi ah oo ay ku jiraan 24 saacadood oo cabasho ah oo cabasho ah iyo dammaanad dayactir 72 saacadood ah.
2. U maaree sida nidaamka wax soo saarka caatada ah oo dammaanad ah inaad alaabada gaarsiiso wakiillada 3 maalmood gudahood.
2. Xakamee badeecadaha cararaya iyadoo soo saareysa "Nidaamka Maareynta Badeecadaha Badeecadaha" lana dhiso koox xirfadlayaal ah oo suuqa ka ilaaliya si ay u qabtaan howlaha suuqa carqaladeynaya.
3. Badbaadinta suuqa adoo dhiirrigelinaya dukaamada silsiladaha leh ee "hal degmo ama degmo, hal dukaan", awoodda aasaasiga ah ayaa fududeyn doonta dhammaan xubnaha kooxda guul.
Dhis dhaqanka sare ee ganacsadaha, soo jiidashada tayada
1. Ku shaqee istiraatiijiyadda maaraynta "Talent oriented" sidaa darteed qof kasta oo horumar la sameeya shirkadda wuxuu heli doonaa daaweynta ugu fiican iyo dakhliga iyada oo loo marayo cusbooneysiinta farsamaynta iyo tikniyoolajiyadda horumarsan isla xaaladaha shaqada.
2. In la dhameystiro nidaamka dallacaadda iyo tababarka si shaqaalle kasta uu u helo fursad dhiirrigelin fiican iyo daaweyn ah barashada iyo ku celcelinta.
3. In la wanaajiyo dhaqanka ganacsadaha lana dhiso nidaam adag oo adeega shaqaalaha ah si qofkasta diirada u saaro ka shaqaynta iyo dadaalka loogu jiro horumarka shirkada.
In la xoojiyo kartida hawlgal ee ganacsadaha lana fuliyo istiraatiijiyad maamul
1. Dammaanad qaadka 100% u qalmida adoo qaadaya nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001.
2. Soo dejinta nidaamka maaraynta shirkadaha iyo nidaamka wax soo saarka caatada ah marka la gaaro sanadka 2020, shirkadaha laamaha ayaa kordhin doona awoodda sanadlaha ah ee 10 milyan oo nooc.
3. Qorista shaqaale tayo leh oo dhammeystira nidaamka abuurista si cilmi baaristu ay u hagto cusbooneysiinta warshadaha, iyo horumarinta wax soo saarka ayaa hagta dalabaadka suuqa, ka dibna suuqyada ayaa dalbanaya baaritaanka badeecadaha.
Iskaashi Daacad ah Iyo Guul-guul
Sameynta qalab tayo sare leh, Dhiirrigelinta horumarinta warshadaha.
aqoon isweydaarsiga robotka gawaarida
khadka gawaarida gawaarida
aqoon isweydaarsi duritaan
aqoon isweydaarsiga alumumin
aqoon kororsi dhiman
aqoon isweydaarsiga kombaresarada-01
aqoon isweydaarsiga kombaresarada-02
Shirkadaha yar-yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee ku saleysan tikniyoolajiyadda gobolka
18 Shatiyada muuqaalka 14 Shatiyadaha nooca utility 4 Shatiyadaha alifaadda
Tikniyoolajiyad sare oo heer-sare ah oo heer gobol ah iyo ganacsiyo dhexdhexaad ah
Ganacsiga Qaran ee Sare
Waddanka Bariga Dhexe
Ruushka / Koonfurta Ameerika / Yurub
Wadanka Koonfur-bari Aasiya Sida
Xuquuqda daabacaadda © 2021 ZHEJIANG JINGLI TOOLS CO., LTD. Farsamo by MEEALL